हाम्रो शरीरलाई दैनिक कति मात्रामा क्याल्सियम आवश्यक पर्दछ ? – ramechhapkhabar.com
हाम्रो शरीरलाई दैनिक कति मात्रामा क्याल्सियम आवश्यक पर्दछ ?
विशेषगरि क्याल्सियम हाम्रो शरीरका हड्डीमा पाइन्छ । यसको मुख्य कामहड्डीलाई मजबूत पार्नु हो । क्याल्सियमको कारणले गर्दा नै मुटु, मांसपेशी, रगत तथा स्नायुकोषहरुले पनि शरीरमा स्वस्थ रुपमा काम गरिरहेका हुन्छन् ।
तपाईंलाई राति ढिलोसम्म निद्रा आउँदैन र बारम्बार कोल्टे फेरिरहनुहुन्छ भने तपाईंलाई अनिद्राको समस्या छ । दिनभरि काम गरेर पनि राति राम्रो सुत्न नसक्ने मानिसहरू भेटिन्छन् । यसको एउटा कारण स्ट्रेस हो । यहाँ हामी अनिद्राको समस्या हटाएर मीठो निद्रा दिलाउने एउटा विशेष ड्रिंकका बारेमा बताइरहेका छौं । कागतीमा स्लीपिङ हर्मोनलाई सक्रिय बनाउने गुण हुन्छ । त्यसैले राम्रो निद्रा दिलाउन यो सफल छ ।
अफिसको टेन्सन वा घरका समस्याका कारण मानिसहरू स्ट्रेसमा हुन सक्छन् । कागतीले स्ट्रेस कम गराउँछ । चिकित्सकहरू लेमन ड्रिंकको फ्लेवर भएको परेफ्युम र रूम फ्रेशनर सुँघ्ने सल्लाह दिन्छन् । त्यसले स्ट्रेस घटाएर निद्रा दिलाउँछ र केही समयमै असर देखाइहाल्छ ।
कागतीको ड्रिंक बनाउनका लागि चाहिने सामग्री एउटा कागती एक चिम्टी नून
कागतीलाई काट्नुस् । त्यसको रस निचोरेर निकाल्नुस् । एक गिलास पानीमा कागतीको रस राखेर मज्जाले मिलाउनुस् । त्यसमा नून हाल्नुस् र सुत्नुभन्दा आधा घन्टाअघि पिउनुस् । तीन दिन लगातार पिएपछि नै अनिद्राको समस्या निकै समाधान हुन्छ ।